Bangu-36 abantu ababulawe wukubheduka kwesifo iListeriosis kuleli | News24
Bangu-36 abantu ababulawe wukubheduka kwesifo iListeriosis kuleli
Pretoria – Kushone abantu abangaphezu kuka-30 kulandela ukubheduka kwesifo iListeriosis eNingizimu Afrika.
UNgqongqoshe wezeMpilo kuleli uDkt Aaron Motsoaledi umemezele ngoLwesibili ukuthi yize iListeriosis iyisifo esibucayi, singakwazi ukwelapheka ngokudla ama-antibiotic. Leli gciwane litholakala emhlabathini, emanzini nasezitshalweni.
UMotsoaledi uthe abantu abasengozini kakhulu ngabadala, izingane kanye nabagulayo.
Zibalelwa ku-557 izigameko zalesi sifo esezibikiwe, kanti iningi lazo zibikwe eGauteng.
Uthe bakwazile ukulandelela iziguli ezingu-70, kwathi ezingu-36 kuzona zashona.